Date My Pet » Mampiaraka Etiquette
Last nohavaozina: Jan. 13 2021 | 4 min namaky
Iray ny lehilahy namako nilaza tamiko fa indray mandeha mitondra ny datin 'ny ankizivavy izay nampiseho ny mamo amin'ny daty voalohany ka nanao handoa manerana azy! Soa ihany fa na dia tsy mbola niaina aho fa mino aho fa efa nisy daty rehetra izay tsotra fotsiny mahatsiravina, izay olona nanao zavatra tsy mety tanteraka ary naniry fotsiny ny tany, ka misokatra hitelina anao manontolo. Ary tsara tarehy aho antoka antsika satria samy nanana ny anjara tsara tarehy ny ho nofoanana tamin'ny minitra farany, ary angamba aza rehefa nitsangana. Plus dia efa nandre ny zava-doza rehetra hafa momba ny daty voalohany handeha ratsy. Ka inona no maharatsy ny lasa fiheveranao izany rehetra izany, ary ahoana no azo hofadina. Izany dia nidina teny kely roa 'mampiaraka etiquette'.
Inona no mampiaraka etiquette? Mihevitra aho fa tsara izany ho toy ny tari-dalana napetraka ny Fantaro izay mamela ny mampiaraka traikefa mba handeha hampandeha tsara sy hahafinaritra kokoa ho an'ny olona mandray anjara. Mazava ho azy fa tsy afaka mifehy ny zavatra ataon'ny olona iray hafa, mba hahafahantsika ihany no misafidy ny ho tompon 'andraikitra amin' izao fitondran-, ary mino aho fa raha toa isika misafidy ny hitondra ny hafa mampiaraka tsara sy ny voninahitra etiquette dia isika dia hanana be mahafinaritra kokoa sy manageable traikefa ny mampiaraka ny tenantsika. Plus manana lalàna iray mikasika ny fitondran-tena ho an'ny tenantsika dia afaka hanampy antsika ho soa aman-tsara.
Miaraka etiquette Mety ho tafiditra amin'izany ny zavatra toy ny rehefa hiantso, Impiry no hafatra tsirairay, ianao na valiana ny hafatra rehetra sy ny antso an-tariby, timings sy lateness ny daty, izay mitafy, izay miresaka momba ny daty, raha mba mahazo ara-batana, fa ny zava-dehibe indrindra fomba fitondranareo ny hafa sy ny fomba manantena hoentina. Rehefa mahita mandrakotra be isan-karazany amin'ny lafiny ary toy izany koa izany ho lasa somary be sy mampisafotofoto. Plus dia ho hitanao fa olona samy hafa isan-karazany hevitra momba izay ary tsy azo ekena ny fitondran-tena rehefa mampiaraka, ary toy izany koa ny zavatra tsara indrindra tokony atao dia mamorona ny anao hametraka ny tari-dalana izay miasa ho anareo, ary hajao ireo. Rehefa tena mahazo avy any, ary mampiaraka ny olona iray azonao atao amin'ny fotoana iray ny toro lalana mizara amin'izy ireo raha toa ka noho izany dia fidio, ary ifanakalozy hevitra mba ho antoka fa samy sambatra sy araka izay sitraky ny fomba hafa mampiaraka Somary. Tafiditra tanteraka izany fanaovana ny marina, ary ny sasany avy amin'ny fari-matotra ny olona roa. Mino aho fa raha nanao izany ny olona matetika kokoa ratram-po be ho hofadina.
Voalohany indrindra aza, fandinihana mampiaraka etiquette dia ho anao. Rehefa mitondra tena amin'ny fomba mahatsapa tsara ny dia manomboka mankasitraka ny tenantsika sy ny tena manaja sy ny fiheverany ny tenany Grow.
Ohatra dia mety hanapa-kevitra ianao fa mahalala fomba ny hamela ny olona iray no mitondra ny datin indray mandeha mahafantatra ianareo raha tsy mandeha ny hahita azy ireo intsony, Mety hanapa-kevitra na ianao fa tsy izany no ilaina. Raha toa ianao ka vehivavy mba misafidy fa tsy hanana firaisana ara-nofo eo amin'ny daty voalohany satria tiany ianao ho tsara kokoa miandry ny olona fantatrao tsara kokoa. Na ianao mihitsy no tena fihetseham-po mafy ny tsy ho foana miandry daty na ny hafatra ho niverina. Ireo rehetra nety ho lavo eo ambany 'mampiaraka etiquette'.
Ireto misy tari-dalana tsara tarehy fitsipika maro no misafidy ny hanaraka ho anisan'ny mampiaraka etiquette:
Ho ara-potoana ny daty
Aza mijoro olona niakatra tamin'ny minitra farany
Aza atao tena nisotro amin'ny daty voalohany
Aza mandany ny alina miresaka momba ny taloha (Manoaka)
Manao zavatra mety ho ny daty mitranga ianao
Aza tonga dia manantena firaisana ara-nofo eo amin'ny daty voalohany
Raha ny marina ny olona maro fotsiny hoe ny ambony ny fahalalam-pomba. Na izany aza ny hafa sasany ny mampiaraka intricacies kely etiquette mety kokoa ny faritra fotsy. Ka manokana fotoana mba nahatsiaro an'i faritra tsirairay manapa-kevitra ny hoe mampiaraka sy ny fitsipika sy ny tari-dalana ny tsirairay. Mety manao ny tondrozotra fa tsy daty olona izay mijoro anareo tamin'ny minitra farany, na mba tsy ho daty vehivavy izay tena tara. Mety hanapa-kevitra ny tsy mitafy Mini zipo amin'ny daty raha toa ianao ka vehivavy satria maniry ny hanome classy kokoa fahatsapana. Tari-dàlana ireo dia ho toy ny tsy manam-paharoa toy ny ianao sy ny zava-dehibe dia ny hahazo mazava momba ny atao hoe aina ho anao sy izay tsy azo ekena ho anao manokana.
Koa ahoana no hiatrehana azy io rehefa misy olona manao zavatra tsy tianao? Inona no ataonao rehefa misy olona handika ny anankiray ny fitsipika? Araka ny voalaza teo aloha dia tsy afaka ny hifehy ny olon-kafa mitondra tena ary tsy ho tiantsika. Ary noho izany dia nidina any aminareo izay vonona ny hanaiky sy izay hanatona ny tsipika. Ohatra raha ny torolalana dia tsy te-ho foana niandry ny daty, ary ianao manana ny olona iray izay tara, ny hevitra ny antso voalohany dia ny mamela azy ireo izay tsapanao momba izany. Afaka manao izany amin'ny fanomezan-tsiny tsy, fomba tsotra fotsiny ny fizarana ny fihetseham-ponao ary fa tsy zavatra tianao amin'ny mampiaraka fifandraisana. Na izany aza ahoana raha miverimberina niampita ny tsipika? Tsara dia mila mafy izany manapa-kevitra ny tsipika dia ho anareo. Raha tena mahatezitra anao sy tsy afaka handefitra ny fitondran-tena dia izay olona tsotra izao tsy ho mendrika tsara ho anao. Rehefa avy nizara ny zavatra tsapanao raha mbola manao izany ianao dia na mila ho foiko fifaliana sy vaovao farany ny tondrozotra ho an'ny tenanao, na dia mila nandefa azy. Izany no fomba mampitombo matoky ny tenanao ary ny sisin-.
Mariho fa ny ampahany lehibe indrindra, mandritra ity lahatsoratra ity no niresaka momba ny 'toromarika' fa tsy 'fitsipika'. Izany dia satria heveriko fa zava-dehibe ho anao ny manana nanao fanovana amin'ny tenanao eo amin'ny ny fanandramana ka nahita izay mahatsapa OK ho anao sy izay tena tsy azo ekena. Rehefa mitombo sy hiova ho toy ny olona toy izany koa ny hevitra mety ny hampiaraka. Foana aza hentitra loatra, na izany aza indray mandeha no nanaovanao avy ny tsara ho anao na oviana na nomena fotoana Manoro hevitra aho ny hifikitra amin'ny mampiaraka ny sisin etiquette. Rehefa mandika ny toro lalana io isika dia niverina foana ny hanaikitra antsika.
Soso-kevitra ny Mampiaraka Amin'ny Tinder sy ny hafa Mobile Apps